Hlola iGran Canaria, iziqhingi zaseCanary - World Tourism Portal
Hlola iGran Canaria, iziqhingi zaseCanary
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eGran Canaria
Amawebhusayithi okuvakasha asemthethweni eGran Canaria
Bukela ividiyo ngeGran Canaria
Hlola i-Gran Canaria, isiqhingi sesithathu ngobukhulu e eCanary Islands nesibalo esikhulu kunazo zonke. Imvamisa ichazwa ngokuthi “izwekazi elincane” ngoba inezinhlobonhlobo eziningi zokunikela.
I-Las Palmas - idolobha elikhulu kunawo wonke, elisesigabeni esisenyakatho-mpumalanga yesiqhingi, elinye lamakhosi esiQhingi saseCanary.
I-Playa del Inglés
I-Telde - idolobha lesibili ngobukhulu (inani labantu i-98,000), eliphakathi kweLas Palmas kanye neGran Canaria Airport (LPA).
Inhloko-dolobha iLas Palmas de Gran Canaria, enyakatho-mpumalanga yesiqhingi, ingenye Spainamadolobha amakhulu. Ugu oluseningizimu yalesi siqhingi manje seluphethwe yizindawo zokuvakasha ezihlinzeka kakhulu ngomnotho wakulesi siqhingi. Isikhungo salesi siqhingi sinezintaba, nezinsalela zamahlathi aphayini asendulo eziqongweni. IMaspalomas eningizimu yeGran Canaria indawo yezivakashi, enezinhlobonhlobo ezinkulu kunazo zonke zokujabulisa lesi siqhingi. Uma kwenzeka udinga imininingwane yabavakashi noma usizo oluqondile, isikhungo se-TI sise Yumbo Center.
Ulimi olusemthethweni lweGran Canaria iSpanishi. Kodwa-ke, umuntu uzwa abantu abaningi bekhuluma isiNgisi nesiJalimane ezindaweni zabavakashi.
IGran Canaria Airport (LPA) ingafinyelelwa yizo zonke izindiza ezinkulu
Uhlelo lokuhamba komphakathi luhleleke kahle futhi lunomnotho. Kunamabhasi ajwayelekile ahamba sonke isiqhingi, iningi lawo alusizo kubavakashi abahamba nge-Avda.
Ukuya kwezinye iziqhingi akukude, futhi isiqhingi esiseduze kakhulu sikhona Tenerife okuyi-2½ kuphela ngehora lesikebhe.
Isimo sezulu siyindawo engamanzi eyindawo encane, kodwa kungahlukahluka ngokuya ngokuthi uya kuphi. Kumahhotela amakhulu okuvakasha isimo sezulu sithandeka kakhulu.
I-Arguineguín inesimo sezulu esihle kunazo zonke, enomoya omncane, futhi, ngenxa yendawo yayo evikelekile, phakathi kome kakhulu ebusika.
ILas Palmas inesimo sezulu esihlukile, futhi kwesinye isikhathi iba namafu futhi kube nemvula, ngisho ngoMeyi noma ngoJuni, kepha akuvamile kakhulu. Uma uhamba ebusika thatha okungenani ijacket enkulu noma amabili. Uma uhlela ukuya ezintabeni kuletha noma uthenge isikhafu namagilavu. Iphuzu lokubamba iqhwa lingafinyelelwa kuPo de de N Nlings.
Ngesikhathi sasehlobo, njalo ulethe ibhodlela lamanzi phakathi nosuku. Uma kwenzeka imimoya evela eSahara futhi amazinga okushisa enyuka ngaphezu kwe-40, zama ukuhlala emathunzini, eduze nomoya ohlangene futhi njalo uphuze amanzi amaningi.
Izindunduma zesihlabathi eMaspalomas (cela “i-Las Dunas de Maspalomas”). San Bartolomé de Tirajana.
IPalmitos Park, iBarranco de Los Palmitos s / n. I-35109 Maspalomas Gran Canaria. Izilwane ezahlukahlukene (izinyoni ezihlukile) kanye namahlathi angaphandle. Kunemibukiso enophwayi, amahlengethwa nezinyoni zezinyamazane (okhozi, oklebe, njll). Indawo enhle yokuya nezingane i-2 + yrs nangaphezulu. Ungachitha amahora we-3-4 lapho.
I-Nuestra Señora del Pino
Le ndawo iluhlaza kakhulu ngokubekelwa ngamatshe okwakhiwa kanye nemifula emaweni. Inamahlathi kaphayini, amagquma esundu nezihlahla zom-alimondi (eziqhakaza ngoJanuwari nangoFebhuwari) nazo zonke izinhlobo zezimila ngaphakathi kwe-39.15 km2. Lesi sikhungo esingumlando nezindawo eziseduzane zinikeza ukulandisa okubalulekile komlando njengeSonto le-Saint Michael Archangel, amakamelo wangaphambili weCavalry, kanye nemidwebo ye-Flemish. Ukunikezwa kwe-gastronomic ehlukahlukene kufaka phakathi ushizi wendabuko, iwayini, uju kanye nama-alimondi, konke lokhu okungesinye sezikhangisi ezinkulu zeVal23illo.
Lesi siqhingi siyipharadesi lamabhayisekili, anemizila eminingi yokuhamba ngebhayisikili yezintaba, kusuka kokulula nokude kakhulu. Kunamathuba amaningi okuhamba ngebhayisikili lomgwaqo, esifundeni sezintaba nangasogwini. Kunezikhungo zokuqasha ibhayisekili kulesi siqhingi.
ISurf Canaries Surf School (iSurf School Gran Canaria). IGran Canaria yindawo efanelekile yokufunda ukusebenzisa i-surf. Isigaba se-surf sizokusethula ngokuphepha ngenqubo elungile. Sebenzisa isikole esidumile se-surf njengeSurf Canaries, isikole esisebenza ngeSurf eseningizimu yesiqhingi abathatha amaqembu ukuya emabhishi afanele ukuze afunde futhi anikeze amakilasi ajulile futhi ajabulisayo nabafundisi abafanelekayo. Usuku olukhulu uma ujabule njalo ngokufuna ukwenza!
I-Gran Canaria iyipharadesi lokuhamba kwamagquma nemizana yalo yomhume eyakhiwe, ichibi lokuhamba echibini, indawo ebabazekayo yezintaba kanye nezimbali ezinhle nezimbali ezinhle ikakhulukazi e-Spring. Kunezindlela eziningi ezinhle zokuhamba ngezinyawo emizileni evelele, eziningi zalezi zingashayi eceleni futhi isimo sezulu sihamba kahle.
Iningizimu yeGran Canaria idume ngezinhlobonhlobo zamabhishi. Ibhishi ende kunazo zonke yi- "Playa del Inglés" ne "Maspalomas", indawo ecishe ibe ngu-4 km ukusuka olwandle phakathi kwePlaya del Inglés neMelonere ulwandle olusetshenzisiwe. Endaweni yaseMogán kunamanye amabhishi adumile, anjenge- "Amadores", "Anfi del Mar", "Puerto Rico", ne "Playa de Mogán".
Kuchazwa ngokuthi "Hawaii kwe-Atlantic ”, i-surf on Gran Canaria ingaba yinto emangalisayo. Ngosuku olufanele ababambeli bayobeka umbukiso wamahhala futhi omuhle, kaningi enyakatho yesiqhingi kodwa naseningizimu ngezimo ezifanele - iMaspalomas, iPlaya del Inglés ne-Arguineguin. Futhi kuyindawo enhle yokufunda ukuhamba ngamabhishi amnandi kanye nezikole ezimbalwa ze-surf ezinhle kakhulu.
Isiqhingi ekhaya SpainIklabhu yegalofu elidala kakhulu kanye nezifundo ezintsha eziyisishiyagalombili, ikakhulukazi zitholakala eningizimu yesiqhingi.
Ukuntweza emanzini. IGran Canaria ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eYurophu ukuba ize eScuba Diving, ngoba ingesinye sezindawo ezaziwa kakhulu eSoutherly, futhi inamanye amanzi afudumele kakhulu. Yize kungenjalo 'ezindaweni ezishisayo' esimeni sezulu, amanzi anezinhlobo ezinemibala ekhanyayo njengeParrotfish, i-wrasse ne-Dameverish. Kukhona nezinye izinhlobo ezinkulu ezijabulisayo, ama-angel oshaka (uhlobo olusengcupheni), izinhlobo eziningi zama-ray kubandakanya imisebe yama-butterfly nemisebe ye-mobula, nefudu elingathandeki lingakuphakamisa ukuhudula kwakho. Njengoba siyindilinga, kunezindawo ezinhle zokuntywila emanzini nxazonke esiQhingini, zazo eziphambili iSardina del Norte eNyakatho (edume ngeManta Rays ekwindla), iLas Palmas (edume ngokudonswa okukhulu kakhulu emabhanoyini), e-Arinaga oGwini oluseMpumalanga (edume ngendawo yokudonsela phansi eduzane kwe-'El Cabron 'ebonakala ngokuphila kwasolwandle, kanye neNingizimu yesiqhingi, ikakhulukazi iMogan. Ingxenye eseningizimu yalesi siqhingi inezindawo eziningi zokudonsa kanye nezindawo eziningi zokudlela. iningi lihlela Uhambo lwansuku zonke ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo ngokuqashwa kwamahhotela kanye namanani entengo wokuqasha imishini. Izincwadi eziningi zemihlahlandlela yokuhamba ziveza isikhungo esisodwa noma ezimbili zokudonsa.
Ngaphandle kwezindawo eziningi zokudlela ezinhle zezizwe ezahlukahlukene, iCanary Cuisine ibaluleke kakhulu ukuzama. Izindawo zokudlela eziningi zisebenza ngewayini lendawo kanye neRioja.
E-Las Palmas kunezindawo zokudlela eziningi ezinhle kakhulu zezinhlanzi, ikakhulukazi ogwini oluseduze nolwandle lwaseLas Canteras kanye ne-El Confital endaweni yaseLa Isleta. Isitsha esijabulisayo ngamaChancletes al limón, kepha ezinye izinhlanzi eziningi zasendaweni zinhle kakhulu.
Njenge eceleni, lapho uhlala endaweni yasePlaya del Inglés, lindela ukubuza njalo “ngabakhongi” abafuna ukuthi udle endaweni yokudlela abayisebenzelayo. Ngeke igwenywe kepha icasula kancane ngokuhamba kwesikhathi.
I-Yumbo Centrum ibusa isikhungo sePlaya del Inglés. Inezindawo eziningi zokudlela, imigoqo kanye namakilabhu, okunakekela umphakathi wezitabane, ikakhulukazi phansi.
Eminye imigoqo eshibhile itholakala ohlangothini lwaseNtshonalanga phansi komhlaba.
Kunobugebengu obuncane kakhulu ezindaweni zokungcebeleka; ukucasulwa okuyinhloko izidakwa ezidala inkathazo. Njenganoma ikuphi, umuntu akufanele ashiye izinto eziyigugu zinganakekelwa ebhishi.
Uma usohambweni lokuhlola iGran Canaria futhi ikakhulukazi i-Las Palmas, ukusebenzisa umqondo ojwayelekile emadolobheni amakhulu kuyalulekwa. Eminye imigwaqo ingakhanyiswa kabi futhi indawo ezungeze itheku ingaba yingozi kangako.